Crazy Stuff | YOPE
Ye Yint Htay
Kyaw Naing Tun
Home \_ Crazy Stuff
HOW TO AVOID THE HOT DAY
When I getaJob (Expectation)
How to dance Dab Dance
Biskis In Myanmar
Because ofasalad
Crazy Stuff of Photoday
Crazy Stuff of the Society
On the Pay Day..
Let’s Go trip
How to beafacebook celebrity
How do 90’s Kids play games?
Ways to live on happy and healthy life
Things that Parents want to be
Crazy Stuff: Behind the Scenes
Yope March 9, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီတစ်ပတ်တော့ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်. ဒီထဲက အကြောင်းအရာတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် tag လုပ်ပြီး share ကြရအောင်.. စာမေးပွဲဖြေဆိုနေကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အထစ်အငေါ့မရှိ ချောချောမောမော ဖြေဆိုနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်. www.yope.com.mm www.mizzima.tv
5 types of people in your office
YOPE July 15, 2016
Yope ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီနေ့ အလှည့်ကျတင်ဆက်မှာကတော့ crazy stuff အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရုံးခန်းထဲမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့သူတွေ ရယ်မောစရာအဖြစ် စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ရုံးခန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာရော ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ တွေ့ရတတ်လဲဆိုတာ…
ထီးကို အခြားဘယ်နေရာတွေ မှာ သုံးနိုင်ဦးမလဲ
YOPE July 12, 2016
လူတိုင်းက ထီးကို နေပူရင်ဖြစ်ဖြစ် မိုးရွာရင်ဖြစ်ဖြစ် ဆောင်းဖို့သုံးကြပါတယ်.ကျွန်တော်ကတော့ ထီးကို အခြားနေရာတွေမှာလဲ သုံးလို့ရသေးတာကို ပြသသွားမှာပါ။ သူငယ်ချင်းတို့ကရော.. ဘယ်လိုတွေသုံးကြသေးလဲဆိုတာ ပြောပြပါဦး….
Yope May 24, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ. အခုလို ဘယ်သွားသွား သိသိသာသာ အရမ်းပူပြင်းနေပါတယ် . YOPE က ကိုနေပိုင်ကတော့ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ အပူရှောင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေ ဝေမျှပေးထားပါတယ်. အားပေးပါဦး . သူငယ်ချင်းတို့မှာလဲ အပူရှောင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိ ရင် ပြောပြပေးခဲ့ပါဦး. www.yope.com.mm
Yope April 27, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ အတွေးအခေါ်ကောင်းနေဖို့လိုပါတယ် ဒါမှ သူများနဲ့မတူဘဲ ဆန်းသစ်တဲ့ အရာတွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ. ဒီတော့ အတွေးအခေါ်ကောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ . Video လေးမှာ ကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတို့မှာလည်း နည်းလမ်းကောင်းတွေရှိရင် မျှဝေသွားပါဦး. www. yope.com.mm
5 types of football players
YOPE August 5, 2016
မင်္ဂလာပါ Yope သူငယ်ချင်းတို့ရေ.ဒီနေ့ crazy stuff အစီအစဉ်ကနေ ဘောလုံးကစားတဲ့အခါ တွေ့ရတတ်တဲ့ သူတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်….ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Selfie မရိုက်သင့်တဲ့ အခြေအနေ (၅) မျိုး
YOPE June 30, 2016
Selfie တွေရိုက်ရတာ မိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရိုးသားဆုံးပြောရရင် ၊ ကျွန်တော်တို့ နေရာတိုင်း၊ အချိန်တွေတိုင်းမှာ ပုံတွေရိုက်ဖို့လို့မှာလား ? …..
Yope October 14, 2016
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ crazy stuff ကနေ YOPE ရက် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် crazy stuff ရိုက်ကူးရေးနောက်ကွယ်က ပုံရိပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.. crazy stuff ကို ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ တင်ဆက်နိုင်အောင် ကြိုးစားလျက်ရှိတာမို့ သူငယ်ချင်းတို့က ဆက်လက်ပြီး ဒီထက်အားပေးကြပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ..
How to wear longyi
Is Yangon an unsafe area for women?
Young People ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် လူငယ် ရုပ်သံ အစီ အစဉ်ကို ဆန်းသစ်သောအမြင်၊ ဆန်းသစ်သော ရိုက်ကူးချက်များဖြင့် မဇ္ဈိမမီဒီယာက တင်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
Why would you giveaV-Day Present to your love?
WAA TEE Goes to Yadanapone Cafe’
Dare to give your facebook password to your very closed one?
လူငယ်များအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး ပေါ့ပါးလတ်ဆတ်သည့် အတွေးအမြင်များဖြင့်ကဏ္ဍစုံပါဝင်သော ရုပ်သံအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်များထံ ရသစုံပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။
Copyright by yope.com.mm 2016